Jubbaland : Waxa Baydhabo ka socda Kismaayo lagama samayn karo - BBC News Somali
Wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirishiid Xasan Cabdinuur (Janan) oo la hadlayay saraakiisha ciidamada ayaa dowladda federaalka ah ku eedeeyay in ay farogalin ku hayso maamul goboleedyada, wuxuuna ka digay in maamulkiisa ay tallaabo adag ka qaadi doonaan ciddii kusoo xad gudubta.
"Meesha la yiraahdo Baydhabo doorashaa ka socota, wax aka jirana waad ogtihiin, baabuur dad laga soo hormariyo, 20 wasiir oo la'isku soo daro, anaga doorasho ayaan u soconaa, qof kii raba in uu doorasho galo waxaan ogolnahay isaga oo nabad ah, oo shaqsi ah in uu garoonkaas kasoo dego, ma dhibaateyneyno, xaq buu leeyahay, laakiin waxa dadka qaarkiis lagula dhaqanaaya ciddii nagula dhaqanta awood baan u leenahay in aan garoonkaan ka celino" ayuu yiri wasiirka oo saraakiishii uu la hadlayay ay hadalka u jiibinayeen.
"Qofka doonaya in nidaamka aan ku shaqayno mid aan ahayn in uu meeshan ka sameeyo, in marka hore in uu anaga na xaaqo, haba na buufiyo haddii uu rabee, qaab awoodeed haddii aan dareeno, waxaan waddano bakoorado ma ahan" ayuu yiri Cabdirishiid oo u duurxulayay in Jubbaland ay hubeysantahay.
Axmed Madoobe oo caro kala dul dhacay xukuumadda Federaalka.
Arrintan ayaa waxa ay daliil u tahay xiriirka aadka usii xumaanaya ee ka dhaxeeya dowlad goboleedyada iyo federaalka, iyada oo hadda ay xaaladda gaartay in haddalo hanjabaad u muuqda saxaafadda la isu sii mariyo.
Dhawaan madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa laga soo xigtay isaga oo leh "Haddii ay Galmudug nabad noqon weyso, Muqdishana nabad ma ahaanayso" hadalkaas oo loo fasirtay in uu yahay mid fariin cad uu ugu dirayo madaxda dowladda federaalka.
Dhanka dowladda federaalka, markii afraad ayay gogol wada hadal u fidiyeen maamul goboleedyada, taas oo balse laga diiday. Hase yeeshee ma muuqato saansaan muujinaysa in dowladda ay ku shaki bixinayso dadka ka irdheysan.
Doorashada Koonfur Galbeed waxaa isu soo taagay dhawr musharax oo dowladda dhexe xilal sarsare ka hayay, kuwaas oo si weyn loo hadal hayo in dowladda ay ka taageereyso dhan kasta.
Suurtagal ma tahay in Isbahaysi milatari ay sameystaan dalalka Carabta iyo Israa'iil?
Hooyo Soomaaliyeed oo shanteedii carruurta ahayd ay mid keliya uga hartay
Taliyihii ciidanka cirka Pakistan oo fashilay xogta ku saabsan weerarkii ay Hindiya ku qaadi rabeen
Qalfoofta madax bani'aadan oo laga helay cilmi ka yaabiyay seynisyahannada